प्यूठानबाट नेता थापालाई विद्यार्थी नेताहरुको चेतावनी
प्यार अलि खाँन,प्युठान ।
साउन २७ अर्घाखाँचीबुलेटिन -नेकपाका केन्द्रिय सदस्य सूर्य थापालाई प्यूठानबाट विधार्थी नेताहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
सामाजिक संजालमा नेता थापाले पार्टी एकता एंव अध्यक्ष प्रचण्डको मानमर्दन हुनेगरि फेसबुकमा स्टाटस राखेको भन्दै कडा आपत्ती एंव विरोध प्रकट गरेका हुन् । माओवादी पृष्ठभुमिका युवा नेता नेकपाका केन्द्रिय सदस्य तथा युवा संघका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा (दिपशिखा) र एमाले पृष्ठभूमिका नेकपा केन्द्रिय सदस्य सूर्य थापाको फेसबुक युद्धमा जिल्ला कमिटि प्यूठानका सदस्य तथा विद्यार्थी नेता सुमनराज श्रेष्ठले नेता थापालाई कडा चेतावनी दिएका हुन् ।
“पार्टी नेतृत्वप्रति घृणा, तिरस्कार र बहिस्कारका भाव बोल्ने गरि उहाँ विगत देखिनै प्रस्तुत हुनुभएको छ ।” अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका श्रेष्ठले भने, “पार्टीको आधिकारीक मार्गदर्शनलाई नमान्ने र पार्टी हित तथा नीति विपरित बोल्दै हिड्ने र प्रचारबाजी गर्ने छुट उहाँलाई छैन् ।
” प्राप्त उपलब्धिहरु हाँसिल गर्नमा पूर्व माओवादीको नै मुख्य देन रहेको विद्यार्थी नेता श्रेष्ठले जिकिर गरे । बलिदान र महान जनयुद्धलाई गरिएको अपहेलना सह्य नहुने उनको भनाई छ । “यी हातहरुले हतियार चलाउन विश्राम मात्र लिएका हुन् कमरेड, भुलेका चाहीँ छैनन् ।
” श्रेष्ठले नेकपा नेता थापालाई लक्षित गर्दै सामाजिक संजालमा पोष्ट गरेका छन् । यसैबिच नेकपा जिल्ला कमिटि प्यूठानका सदस्य एंव विद्यार्थी नेता विनोद भण्डारीले पार्टी एकतालाई भाड्ने ढंगबाट कोही–कसैले सामाजिक संजालको दुरुपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिए । “पार्टीका चर्चित केन्द्रिय नेताहरुमा नै विचारमा यस प्रकारको विचलन हुनु, आरोप–प्रत्यारोप हुनु दुर्भाग्य हो ।
” नेता भण्डारीले भने, “यो पार्टीेका स्कुलिङ्गभित्र किमार्थ पर्दैन् ।” पार्टी एकता र नीति विपरित बोल्ने जो–कोहीलाई अनुशासनको कारवाही हुनुपर्ने नेता भण्डारीले बताए । “हामी कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता हौँ ।” अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सदस्य समेत रहेका नेता भण्डारीले भने, “नीति, विधि अनुसारको कार्य नभएमा वा कुनै समस्या आएमा तर्क संगत खुला वा बन्द टिप्पणी गर्न सकिन्छ, न की छुद« व्यक्तिगत लाल्छना लगाएर होइन ।” “आफुले आजसम्म कसैलाई एक झापड नहानेको र कसैको एक झापड नखाएको” भन्ने नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्ती सामाजिक संजालमा निकै चर्चित बनेको छ ।
अहिले यहि विषयमा नेकपाका दुई युवा नेताबिच फेसबुकमा दोहोरो भिडन्त परेको छ । यस विषयलाई लिएर नेता थापा र दिपशिखाबिचको दोहोरो भनाभनमा केन्द्र देखि प्यूठानमा समेत यस विषयले खुबै चर्चा पाएको छ । सामाजिक संजालमा नेता थापाबिरुद्ध टिप्पणी तथा अभिव्यक्ति बढी मात्रामा आएका छन् ।
यसैबिच पूर्व प्रेस चौतारी नेता एंव पत्रकार विश्वमणी सुवेदीले नेता थापाप्रति लक्षित गर्दै “पार्टी अफिस ढुुकेर तलब आएको भरमा केन्द्रिय सदस्य हुने, तिनैले मैदानमा लडेर आएकालाई दुत्कार्ने ? तपाई के भन्नुहुन्छ कुन्नी ? भन्दै फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गरेका छन् ।